Gabadhyahay Gacaliyahaaga Sababtan ayuu kuu nici karaa Iska Jir (Akhriso Sababta) - iftineducation.com
Gabadhyahay Gacaliyahaaga Sababtan ayuu kuu nici karaa Iska Jir (Akhriso Sababta)
iftineducation.com – Gabdho badani sahal ku waayeen Gacaliyahooda oo ay in muda ah ku hamineeysay ineey wada Noolaadaan isku duqoobaan nolosha isla dhameysataan , Sahal maahane gabadhyahay Taladeyda U feejignoow.
Mowduucaan waa Muhiim u ah Haweenka , waxa uuna ku saabsanyahay Nadaafada Xubinta Taranka Dumarka : Xubnaha taranka dumarku waxay u baahan yihiin in loo daryeelo si ka daran kana feejigan kuwa ragga sababta oo ah.
Xubnohooda taranka waxaa ku hoos jira qanjirro soo daaya dhidid iyo dheecaanno keena ur laga dido.
Qolfada kintirku sida tan geedka ninka aan la gudin oo kale ayay usoo deeysaa dareere si dhaqsa ah isu beddela, si aad ahna usoo ura, kaasi oo loo yaqaan (baaro = dooro).
Cambarku waxa uu soo daayaa dareere aysiidh ah oo hadduu xaddigiisa dhaafo jirka iyo dharkaba halleeya. Afka daloolka kaadidu waxa uu ku yaal meel dedan, taasi oo keenta in dhibco kaadi ahi ay ku hooraan cambarka, keenaanna inuu uro.
Cambarku waxa uu xiriir la leeyahay micnaha quruxda, ninkuna kolka ay haweeneydiisu isu dhiibto oo ay hor dhigto, waxa uu cambarka u eegaa sidii isaga oo hor fadhiya shey xurmo mudan.
Lama xisaabi karo inta dumar daqiiqaddaasi ku waayey jacaylkii gacalkoodu u qabay, sababta oo ah “Albaabkii Jannada” ee uu wax badan dhawrayey baa kolkuu kala furay qurmoon aanu filayni kaga soo baxay.
Muhiimada aan Qoraalkaan usoo qaadanahay waxay eheed ineey Gabdho badan U Dhega furnaadaan Dhacdooyinka ku dhacay Gabdhihii iyagu ka horeeyey si aysan markale u dhicin.
Ma Tahay Nin Rag Ah Oo Ma Is Hubtaa? Kaliya Qodobadaan u Samee? Yaa Loo Sameynaa.